Rugby Tsinjakabe Hotontosaina amin’ny 15 septambra izao ny andiany faha-III
Raikitra fa hotanterahina eny amin’ny kianjan’i Mahamasina, amin’ny alahady 15 septambra 2019 izao,
ny andiany faha-III amin’ny hetsika Rugby Tsinjakabe karakarain’ny orinasana haino aman-jery sy fikarakarana lanonana ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina ny SPC “Sports et Cultures” tarihan-dRakotomanalina (Vévé) izay tsy zoviana intsony eo amin’ny tontolon’ny rugby. Ahitana lalao rugby goavana 3 miantoana be izao hanolorana valopy ho an’ireo mpandray anjara ny tapany maraina : 9:00-Scb Besarety # 3Fai Ambalavao Isotry, 11:00-Ftm Manjakaray # Tfma Ankasina ary 13:00-Cnaps Rugby # Tam Anosibe. Ny tolakandro manomboka amin’ny 3ora kosa dia rindran-kira hiarahana amin’ny tarika Tsota, Leon Hill, Bolo Pixx, MIJAH, Wada sy Uyoongs. Nomarihan’ny mpikarakara fa tsy ho latsa-danja noho ireo andiany 2 voalohany ity hetsika ity ary nokendrena hanomezana fahafaham-po an’ireo tanora vao avy nanala BEPC. Mbola nomarihany ihany koa fa hivoha manomboka amin’ny 7 ora maraina ny vavahady ao Mahamasina amin’io andro io.
Rakotomanalina (Vévé), tomponandraikitry ny orinasa Soees